BullyingCanada - बलिङ गरिएका बच्चाहरूलाई उज्ज्वल भविष्य दिँदै
सहयोग गर्न उभिएको छ मद्दत पाउनुहोस् अब मद्दत प्राप्त गर्नुहोस् समर्थन BullyingCanada संलग्न हुनुहोस् तपाईं मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ BullyingCanada उदारमा भर पर्छ
बदमाशी को एक प्रकार को समाधान
हामी तपाईलाई प्रत्येक पाइलामा साथ दिन यहाँ छौं।
BullyingCanada एक मात्र राष्ट्रिय संस्था हो जसले क्यानाडाली युवाहरूका लागि धम्की दिने अवस्थाहरू समाधान गर्छ, बुलिङ गरिएका बच्चाहरू, उनीहरूलाई पीडा दिनेहरू, अभिभावकहरू, शिक्षकहरू, स्कूल बोर्डहरू, सामाजिक सेवाहरू, र आवश्यक परेमा प्रहरीहरू बीच प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चार सहजीकरण गरेर।
हामीसँग सामेल हुनुहोस्। जीवन बचाउनुहोस्।
हाम्रो आलोचनात्मक समर्थन तपाईं जस्तै स्वयंसेवक र दाताहरू द्वारा सक्षम छ।
2021 मा मद्दतको लागि पुकारको जवाफ दिइयो
धेरै पटक सम्पर्कहरू बनाइयो BullyingCanada 2021 मा, पूर्व-महामारी 2019 मा बनाम
आगन्तुकहरू BullyingCanada.ca 2021 मा
हरेक दिन हामी मद्दतको लागि एक हजार भन्दा बढी पुकार प्राप्त गर्दछौं। तपाईंको उदार सहयोग हाम्रो राष्ट्रको धम्की युवाहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण छ ।
रोब बेन-फ्रेनेट, ओएनबी सह-संस्थापक
कुनै पनि बालबालिकालाई विद्यालय छाड्न बाध्य पार्नु हुँदैन किनभने यो उनीहरूका लागि सुरक्षित छैन—हामीले स्थापना गरेका धेरै कारणहरूमध्ये यो एउटा हो। BullyingCanada.
केटी थम्पसन (न्यू) सह-संस्थापक
दुर्व्यवहार गरिएका बालबालिकाहरूलाई उज्ज्वल भविष्य दिनुहोस्।
सामेल BullyingCanada राष्ट्रको सबैभन्दा कमजोर युवाहरूलाई अत्यावश्यक, जीवन बचाउने स्रोतहरू र सहायता प्रदान गर्न। त्यहाँ सामेल हुन धेरै विकल्पहरू छन्—हाम्रो उदार दाताहरू मध्ये एक हुनुदेखि समर्थन लाइनको लागि स्वयम्सेवा गर्न वा ब्याक अफिसलाई सहयोग गर्न। थप जान्नको लागि आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
हामी सबै यसमा सँगै छौं - हजारौं युवाहरू हामीमा निर्भर छन्।
कृपया अब दान गर्नुहोस्, किनकि हरेक पल गणना हुन्छ!
बच्चालाई जति लामो समयसम्म दुव्र्यवहार गरिन्छ, उनीहरूमा जीवनभर टिक्न सक्ने शारीरिक, भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक दागहरू विकास हुने सम्भावना त्यति नै बढी हुन्छ। धम्कीले आत्मविश्वासलाई नष्ट गर्न सक्छ, बच्चाहरूलाई फिर्ता र असुरक्षित छोडेर, पेट दुख्ने, आतंकित आक्रमणहरू, र दुःस्वप्नहरू। तिनीहरू विद्यालयमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दैनन्, जसले गर्दा तिनीहरूको भविष्यका अवसरहरू कम गर्न सक्ने गरीब ग्रेडहरू हुन्छन्। जब धम्की निर्दयी हुन्छ, डिप्रेसन र तनावले बच्चाहरूलाई आफ्नै ज्यान लिन सक्छ।
हामीलाई मद्दतको लागि पुग्न बच्चाहरूलाई ठूलो साहस चाहिन्छ। तपाईंको उपहारले मद्दतको लागि हरेक दुखित पुकारको जवाफ सुनिश्चित गर्नेछ, कुनै पनि दिन... कुनै पनि समय। तपाईंको दानले हामीलाई बच्चाहरूसँग टाँस्न मद्दत गर्छ जबसम्म हामीलाई बदमाशी रोक्न र उनीहरूलाई उज्ज्वल भविष्य दिन लाग्छ!
तपाईको जिज्ञासालाई कुन कुराले राम्रोसँग वर्णन गर्छ? (*)म एक युवा हुँ र मलाई बदमाशीको सामना गर्न मद्दत चाहिन्छ।मलाई दान वा कर रसिदको साथ मद्दत चाहिन्छ।म कसैसँग विरासत दिने वा सम्पत्ति योजनाको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु।म स्वयंसेवक हुन चाहन्छु BullyingCanada.मसँग सामान्य प्रश्न वा टिप्पणी छ।म मिडियाको सदस्य हुँ र सम्पर्क गर्न चाहन्छु।म अब तपाईंको मेलिङ सूचीमा हुन चाहन्न।
जारी COVID-19 महामारी बारे महत्त्वपूर्ण सूचना
वर्तमान विश्वव्यापी स्वास्थ्य चिन्ता र सीमित स्रोतहरूका कारण, BullyingCanada अत्यावश्यक सेवाहरू मात्र कम क्षमतामा सञ्चालन हुनेछ। यसको मतलब यो हो कि हाम्रा सेवाहरू (इमेल, लाइभ च्याट, पाठ समर्थन, र फोन लाइनहरू) महामारीको अवधिको लागि मात्र युवाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा उपलब्ध हुनेछन्। अन्य सबै व्यक्तिहरूलाई पछिको समयमा फलो-अपहरूको लागि लाइनमा राखिनेछ।